ko htike's prosaic collection: နိင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်သော သားသမီးများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
နိင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်သော သားသမီးများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
(အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် ကျွန်တော် ဘလော့ ဘက်ကို Update သိပ် မလုပ်နိုင်ပေမယ့် .. စာလာဖတ်တဲ့ လူတွေကိုလည်း အားနာပါတယ်။ အခုလည်း မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ရေးလာတာလေးကို ပြန်လည် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြဲ update မလုပ်နိုင်ပေမယ့် အရေးကြီးလို့ လိုအပ်လာရင် စာဖတ်သူတွေနဲ့ အတူ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရေး ကိစ္စ တွေမှာ တောက်လျှောက် လုပ်သွားနိုင်အောင် ပြင်ဆင် ကြိုးပမ်းထားပါတယ်။ .... ကိုထိုက်)
သားသမီးမကောင်း၊ မိဘခေါင်း ဆိုသကဲ့သို့ ယခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အပုပ်နဲ့တွေနဲ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူငယ်များကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗိုလ်မှုး၊ ဗိုလ်ချူပ်တွေရဲ့ သား၊ သမီးများဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်…သူတို့တွေဟာ လူငယ်တွေမို့လို့ ဆိုးတယ်လို့ပြော တာထက် မိုက်ရိုင်းတယ်လို့ ပြောတာ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် … ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားသာမှန် တယ်လို့ပြောရင် သေချာပေါက် မိဘ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှုး၊ ဗိုလ်ချူပ်တွေ မကောင်းတာပါလို့ပြော ရပါလိမ့်မယ် … ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှုတ်ကြမ်းရင် အမိယုတ်လို့၊ ကိုယ်ကြမ်းရင် အဖယုတ်တယ်လို့ ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ် …
အခု ဆိုးသွမ်းပြီးမိုက်ရိုင်းတဲ့ လူငယ်တွေဟာဖြင့် နှုတ်ရော ကိုယ်ရော ကြမ်းတာကြောင့် အမိကော၊ အဖ ကောက မျိုးမစစ်ဘူးဆိုတာ အတိုင်းသာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်…ဒီလို လူငယ်တွေရဲ့ဘ၀ က အမှန်တကယ်တော့ အလွန်ကို သနားစရာကောင်းပါတယ် … မိဘ ရယ် စည်းစိမ်ရယ် အာဏာရယ်က ၀ိုင်းပြီး ထိုးနှက်လိုက်ချိ်န်မှာတော့ သူတို့တွေဟာ လူဆိုးဘ၀ နဲ့ ပြည်သူတွေနှာခေါင်းရှုံ့ရတဲ့ဘ၀ မျိူးရောက်သွားရတာပါ … နအဖ ဗိုလ်ချူပ်သား၊ သမီးတွေနဲ့အပြိုင် ဆိုးသွမ်းနေသူများကတော့ ပိုက်ဆံရှိသားသမီးများပင်ဖြစ်ပါတယ်…အဲဒီထဲမှာ ၀န်ကြီးသားတွေ၊ အဆိုတော်တွေ ၊ဖောလံဖားနေတဲ့ လူကြီးသားသမီးများလည်း ပါပါတယ်…
သူတို့တွေဟာ နိုင်ငံထဲမှာ ဆိုးသွမ်းလို့ မ၀ဘဲ နိင်ငံခြားကို ပါလှည့်ပြီး မကောင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို မြန်မာလူမျိူးသိက္ခာကျလောက်အောင် လုပ်ပြပါတော့တယ်…ဗိုလ်ချူပ်သားတွေ သမီးတွေမိုက်ရိုင်းတာ ကတော့ သိနေလို့ အဖတ်လုပ်ပြီး ပြောမနေချင်ပေမယ့် တချိူ့ လူငယ်တွေ အတုခိုးနေတဲ့ ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်တွေ နိုင်ငံခြားရောက်ရင် အားလုံးပဲချွတ်လိုက်ပါတော့ လို့မပြောရုံတမယ် လုပ်နေတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖာနိုင်ငံဖြစ်နေပြီလို့ ကမ္ဘာကို ကြေငြာနေသလိုပါပဲ .. အရမ်းကို ရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်…
ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာတော့ ယဉ်ကျေးတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ဖြစ်နေလို့ မလုပ်ရဲပေမယ့် ပြင်ပ နိုင်ငံလည်းရောက်သွားရော သွေးက စကားပြောတော့ တာပဲလေ…….ပြည့်တန်စာ မတစ်ယောက်လို ဆိုပြမှ၊ ဖာသည်တစ်ယောက်လို တင်လှုပ်ပြမှ အထင်ကြီးမှာလားဗျာ…….. ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပိုက်ဆံလည်းရှိ၊ အာဏာလည်းရှိုပြီး မပျက်ဆီးတဲ့ သူတွေ မရှိတော့ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်…..ရှိပါ့ဗျား……
တကယ့်ကို စစ်တပ် အသိုင်းအ၀ိုင်း ဗိုလ်ချူပ်ရဲ့ သမီး…..တကမ္ဘာလုံး ကလူတွေ တအားလိုချင်တဲ့၊ အမေရိကန်သမ္မတတောင် ဒီဆုကို ရဖို့ အရမ်းကိုကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ နိုဘယ်လ်ဆုကို ရရှိထားသူ……ဘ၀ရဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကို ပြည်ပ နိုင်ငံမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် ချိတ်ထမိန် နဲ့ ချိ်တ်အင်္ကျီကိုသာ ၀တ်ဆင်သူ၊ သူ့ရဲ့ အစွမ်းအစတွေ အားမန်တွေကို ရိုက်ချိူးပြီး ထိန်းသိမ်းခံထားရပေမယ့် ရန်သူကို အပြူံးနဲ့ ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့သူ၊
မြန်မာအမျိူးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ယောက်င်္ကျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို ဘ၀အဆုံးခံပြီး ယူပေးနေသူ…………….အမေစု (ခေါ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါပဲခင်ဗျာ….......ကျွန်တော် ချီးမွမ်းတာ လွန်နေရင်ပြောပါဗျာ…….အခု ဗိုလ်ချူပ်ကြီးရဲ့ သမီး စိန်စီပြီး ဒေါ်လာတွေ ခဲဖိုးပေးနေချိန်မှာ သူဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိးစီးပွားအတွက် ရတတ်မအေးဖြစ်နေတာပါ …….. စင်ပေါ်တတ်ပြီး ကိုယ့်အနုပညာကို ဖင်ပေါ်၊ ခေါင်းပေါ်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာ မြန်မာလူမျိူးပီသစွာ အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံတောင် မ၀တ်ဘဲ ရိုးရာ အကျီင်္နဲ့ နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခဲ့တာပါ........
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ သူများတွေထက် အတော်ကြီးကို နောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ ကိုယ်ကျင့်သီလ နဲ့ ယာဉ်ကျေးမှုပါ ပျောက်ရင်တော့ မြန်မာလူမျိူးဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး… ရေဆာနေတဲ့ လူကို ရေတိုက်မှ အငတ်ပြေမှာပါ … ရေမတိုက်ဘဲနဲ့ ထမင်းကျွေးရင် စားပိုးနင့်ပြီး သေသွားမှာပါ … အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အတုယူစရာတွေ ဒီလောက် အများကြီးရှိရက်နဲ့ မကောင်းတဲ့ အပြုအမှုကိုမှ ရွေးယူတာကိုး…….သူတို့ရဲ့ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး လေးစားပုံတွေ .. လူတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အသုံးချပုံတွေ .. အစားအသောက် အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပုံတွေ..Gentleman တစ်ယောက်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းအပ်တဲ့ အချက်တွေ… အများကြီးရှိနေပါတယ်……
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး ကွန်ဖြူးရှပ်ကတော့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ အိနြေ္ဒ နှင့် အရှက် ကို လုံခြုံစွာ စောင့်ထိန်းခြင်းလို့ ဆိုထားပါတယ်…မြန်မာ လူမျိူးတွေမှာ အိနြေ္ဒတွေ အရှက်တွေ ရှိပါသေးရဲ့လားဗျာ ….. ရှိတဲ့လူတွေကျတော့ ထောင်ထဲမှာဘဲ သက်တမ်းစေ့ သွားအောင်ချ၊ မနေနိုင်အောင် အမျိူးမျိူးလုပ်၊ နအဖရဲ့ လက်ပါးစေတွေက သားကောင်း၊ သမီးကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီး၊ နအဖက လည်းသူ့ ထိုင်ခုံက်ိုမြဲဖို့အတွက် အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေကို မကောင်းတဲ့အရာမျိုးစုံနဲ့ ဖျက်ဆီး၊ ဒီလို မကောင်းတဲ့အရာတွေ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် မူးတဲ့အရာတွေကို ဖော်ဖော်သီသီရအောင် လုပ်၊ အဲလိုနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်…. အဲလို ဖျက်ဆီးနေတာကို တော်လှန်တဲ့ သူရဲကောင်းများကိုတော့ ဂျပန် နှိပ်စက်တာ အများကြီး သက်သာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်…စာသင်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ၊ သမာဓိရှိတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ သွေးထွက်ခဲ့ရပါတယ်…ပြည်သူ ကိုယ်ကျင့်တရားမရှိလို့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ အစိုးရတတ်တယ်လို့ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုဆိုးသွမ်းတဲ့ အစိုးရရှိလို့လည်း ပြည်သူတွေ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ရတာပါ..
ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို ဘာသာတရားကို အလွန်ပဲ ယုံကြည်လေးစား လိုက်နာကျပါတယ် .. အဲဒါကြောင့် ဘာသာတိုင်းမှာ ပြဠာန်းထား တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား သီလကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြု၍ ဘာသာမဲ့ နအဖ အစိုးရကို တိုက်ထုတ်ကြပါစို့လို့ ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်…
Posted by ကိုထိုက် at 11:05
လျွှောက်ပြောမနေနဲ့မိူးချစ်စိတ်မရှိ၊ဟိရိသြတ္တပတရားမရှိလိုနိုင်ငံခြားယူထားတာပေါ့။မင်းတို့အမေ..အဖွားကြီး...နိုင်ငံခြားမှာနှစ်တွေအကြာကြီးနေပြီးမှ အနောက်ကခိုင်းတာလိုက်လုပ်နေတာပဲ.. no place for her in our country....
ဆောင်းပါး from OE
၈၈ အရေးတော်ပုံအပြီးမှာ ကျောင်းသားတွေထဲမှာ အကြမ်းအားဖြင့် လေးစုကွဲသွားတယ်။ ကိုနိုင်အောင်တို့နဲ့ ပါသွားသူများ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့ ဗကသအဖြစ်ကျန်ခဲ့သူများ၊ ကိုမိုးသီးဇွန်တို့နဲ့ လူ့ဘောင်သစ် ဖြစ်သွားသူများနဲ့ ဒီချုပ်လူငယ်အဖွဲ့မှာ ပါသူများလို့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တော့ ဒီချုပ်ထဲပါတဲ့ အုပ်စုထဲလိုက်သွားပါတယ်။ ဒါကလည်း ဒေါ်စုကို အထင်ကြီးတာရယ်။ မကသ ကလာတာမို့ ဗကသ အောက် ခေါင်းမလျှိုခြင်တာရယ် နှစ်ခုလုံးပါပါတယ်။
ဒီချုပ်ကို သိတဲ့အတိုင်း အောင်စုတင် လူကြီးသုံးဦးခေါင်းဆောင်ပါတယ်။ စီအီးစီကို အောင်စုတင် အုပ်စုတစ်ခုစီက ၁၄ ဦးနဲ့ ဖွဲ့ပါတယ်။ စီအီးစီအားလုံးကို ခေါင်းဆောင်သုံးဦးကပဲ တိုက်ရိုက်ရွေးပြီးခန့်တာပါ။ ဦးအောင်ကြီးထွက်သွားတော့ စီအီးစီဝင်တွေက စုတင်အုပ်စုဝင်တွေပဲကျန်ပါတယ်။ ဒီချုပ် ဗဟိုကို ဖွဲ့ပြီးတော့ ပြည်နယ်၊ တိုင်းစည်းတွေ၊ မြို့နယ်စည်းတွေဆက်ဖွဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံး ဗဟိုဦးစီးစနစ်နဲ့ ခန့်အပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီချုပ်အောက်ခြေအဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ ပြောခွင့်မရှိပါ။ ပြောဖို့ကြိုးစားသူများရှိရင်လည်း ဒီအချိန်က စစ်တပ်နဲ့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လည်း ပြင်ရမယ်။ အခြေအနေတည်ငြိမ်မှ ပြန်ရွေးကြတာပေ့ါဆိုပြီး ခေါင်းဆောင်များက ပြောခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရွေးတော့လည်း စီအီးစီနဲ့ တိုင်းစည်းတွေညှိပြီးရွေးခဲ့တာပါ။ မဆလခေတ်က ပါတီကချပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကို ထောက်ခံရသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ စီအီးစီက ချပေးတာကို ထောက်ခံခဲ့ရတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ဒေါ်စု အထိန်းသိမ်းခံရတော့လည်း ဒေါ်စုမရှိသေးခင် ဒီလိုပဲထိန်းထားဦး ဒေါ်စု ထွက်လာမှ လုပ်ကြတာပေါ့နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၅ မှာ ဒေါ်စုထွက်လာတော့လည်း ခြံဝမှာ ဟောပြောပွဲလုပ် တာ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာ။ စီအာရ်ပီပီဖွဲ့တာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိရောက်ခဲ့ပါ တယ်။ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြင်ဖွဲ့တာ၊ ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီရှင်သန်အောင်လုပ်တာတွေ လုပ်ရမယ့် အစား တိုက်ပွဲတွေဖော်ပြီး ပါတီထုကို ဆွဲဆောင်ထားဖို့ပဲလုပ်ခဲ့တာပါ။ ပါတီတွင်းဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်အောင်တောင် မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ပို့နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ဒါဟာ ဒီချုပ်အပေါ် စိတ်ကုန်ရတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်ပါ။
ဒေါ်စုရဲ့ ပညာအရည်အချင်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်မှု၊ အဟောအပြောကောင်းမှု နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုတို့ကို မျိုးချစ်တွေထဲမှာရော၊ တတ်သိတွေထဲမှာရော၊ အခြားပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာရော ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်တာ မဆလ တံခါးပိတ်ခေတ်မှာ လူဖြစ်ရတဲ့ ကျွန်တော် တို့ကတော့ ဝေးရော။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုက ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က သင်ခန်းစာတွေ အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ မေ့နေခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျန်တဲ့လူတွေ အပေါ် အထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်တာ၊ ပြောတာတွေကို တွေ့လာရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း ဒေါ်စုကြည်ထက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာ ဖဆပလကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်က ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ တို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ ဗမာ့ထွက်ရပ် ဂိုဏ်း စတာတွေမှာ ခေါင်းဆောင်နေရာတွေယူခဲ့သလို့ ဗမာ့တပ်မတော်မှာလည်း ဦးစီးချုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးမှ ဖဆ ပလ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဦးဘဖေ၊ ဦးရာဇတ်၊ သခင်မြ၊ ပျော်ဘွယ်ဦးမြ၊ ဦးဘဂျမ်းစတဲ့ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကို အလေးထားနေရာပေးပြီး ခေါင်းဆောင်မှုယူခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။
ဒေါ်စုကြည်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မျိုးချစ်အဖိုးကြီးတွေကိုယ်တောင် အန်ကယ်ခေါ်ပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ် တွယ်ပါတယ်။ အဖိုးကြီးတွေခင်ဗျာ မစုရေ အန်ကယ်တို့ကလေနဲ့ ပြာနေအောင် ကြောက်ရပါတယ်။ တတ်သိတွေကိုလည်း ဘာတတ်သိပညာရှင်လည်း ဘာညာနဲ့အုပ်တာပါဘဲ။ ဒေါ်စု တန်းတူ ဆက်ဆံတာနှစ်ယောက်တော့ ရှိပါတယ်။ ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဝင်းထိန်ပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မိုးသီးဇွန်က သူ့စာတမ်းမှာ ဒီချုပ် စီအီးစီတွေဟာ ကပ္ပိယကြီးတွေလိုပဲ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဒေါ်စုမသိရင် ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးလို့ ရေးခဲ့တာပါ။
19 December 2009 at 19:35
ပါတီတွင်းမှာ ဒီလို ဆက်ဆံသလို မိတ်ဖက်ပါတီများနဲ့လည်း ဒီလိုပါဘဲ။ ဦးနုနဲ့ ၀ိဓူရသခင် ချစ်မောင်လို အစဉ်အလာကြီးတဲ့သူတွေကိုတောင် ၁၅၈ ပါတီညီညွတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တန်းတူ ပူးပေါင်းလို့မရ၊ ဒီချုပ် ခေါင်းဆောင်မှုကို ခံရင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့သူပါ။ အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့ အဆိုပြုတော့ ကျွန်မတစ်ယောက်ဆိုရင်ရပြီ၊ အန်ကယ် တို့ ကျွန်မကို ကိုယ်စားလှယ်လွှဲကြောင်းသာ လက်မှတ်ထိုးပါလို့ ပြောထွက်တဲ့သူပါ။ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်အဖွဲ့များကိုတော့ လုံခြုံရေးအဆင့်ထက်ပိုပြီး သဘောထားတာမတွေ့ရပါ။
ဒေါ်စုဒဏ်ကို နိုင်ငံခြားသံအမတ်တွေလည်း ခံရဖူးပါတယ်။ ၁၉၉၆ မှာ အာဆီယံကို မြန်မာက ၀င်မယ်ဆိုတော့ ဒေါ်စု ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က စင်္ကာပူ ရောက်တုံး မြန်မာကို လက်ခံမယ့် အာဆီယံရဲ့သဘောထားကို လက်ခံတဲ့အကြောင်း သတင်းထောက်တွေ ကို ပြောလိုက်တယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားတော့ ဒေါ်စုက ဂျပန်သံအမတ် ယိုချီယာမာဂူချီကို ဖုန်းဆက်ခေါ် ပါတယ်။ ဂျပန်သံအမတ်ရောက်လာတော့ အိမ်ထဲအ၀င်မခံဘဲ ခြံထဲက အခမ်းအနားတွေလုပ်တဲ့ တဲထဲမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဒေါ်စုက ထိုင်လိုက် လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ တစ်နာရီလောက်ကြိမ်းမောင်းပြီးပြန်လွှတ်လိုက် တယ်။ ဂျပန်သံအမတ်က အဲဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်အစိုးရဆီကို အစီရင်ခံတော့ ဒေါ်စုကို အလွန်မောက်မာတဲ့သူလို့ သုံးသပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ မိမိအခြေခံမူတွေပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ရမယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်တာနဲ့ ခေါင်းမာတာ၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိတာနဲ့ မောက်မာတာ ကွာခြားတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုမြင်တာများလာတော့ ဒေါ်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အရည် အချင်းအပေါ် သံသယ၀င်လာတာအမှန်ပါဘဲ။
၁၉၈၈ နိုဝင်ဘာကနေ စစ်တပ်က ဒေါ်စုခြံကို ၀င်ရှင်းတဲ့ ၈၉ ဇူလိုင် ၂၀ အထိ ခြံထဲမှာနေခဲ့ဖူးပါ တယ်။ ထို့အတူ ၁၉၉၆ ကနေ ၂၀၀၁ အထိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်စုက လူငယ်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးများကို ညဖက်ဆိုရင် အပေါ်ထပ်မှာခေါ်ပြီး စကားပြောပါတယ်။ နောက်တော့ Safe Sex ဆိုပြီး စကားဝိုင်းဖွဲ့ ပါတယ်။ ပထမတော့ HIV ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြောရင်းနဲ့ နောက်တော့ ကင်းဆေးအစီရင်ခံစာတို့ လေဒီချတ်ဒလီလပ်ဗ်ဗာ စာအုပ်အကြောင်းတွေလှည့်သွားပါတယ်။ ကင်းဆေးအစီရင်ခံစာဆိုတာက အမေရိကန်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ Sex Life ကို သုတေသနပြုပြီး ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်။ ဘယ်နည်းကကောင်းတယ် စသည်ဖြင့် တစ်တစ်ခွခွပြောထားတဲ့စာတမ်းပါ။ အဲဒီလိုဆွေးနွေးတာက ဒေါ်စု နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်နေခဲ့တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ မဆန်းပေမယ့် ဒီမှာတော့ဆန်းပါတယ်။ အကျိုး ဆက်ကတော့ ခြံထဲက လူငယ်တွေကြားမှာ ဇာတ်လမ်းတွေရှုတ်လာတာပါဘဲ။ ဒေါ်စုက ဒါတွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စည်းကမ်းထိန်းဖို့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို ကိုညိုအုန်းမြင့်တို့ ၀င်းဝင်းမာတို့ သိပါတယ်။ အချင်းချင်း စုမိရင်လည်းဆွေးနွေးဖူးပါတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ ဒေါ်စုကို မဝေဖန်ရဲခဲ့ပါ။
နောက်တစ်ခုက ဒေါ်စုနဲ့ ဒီချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေးဗစ်လှမြင့်တို့ရဲ့ မူမမှန်တဲ့ ဆက်ဆံမှု ပါဘဲ။ ဒါကို ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရော၊ ခြံထဲက လူငယ်တွေရော ရိပ်မိပါတယ်။ ဦးအောင်ရွှေတားတော့ ဒေါ်စုက အန်ကယ်တို့အသိအမြင်တွေနဲ့ တိုင်းတာမနေပါနဲ့ ။ West မှာ ဒါဟာ Normal Relationship ပါ၊ ကျွန်မဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်ရွှေလည်း သံအမတ်နဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တာပါ။ ဒေါ်စုပြောတဲ့ Normal Relationship ကို သူဘယ်လိုသဘော ပေါက်လဲတော့ မသိဘူး။ နောက်ထပ်ပြောတာမကြားရတော့ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရှိသူ၊ မရှိသူ ဆိုတာကိုလည်း ၁၉၄၇ ဥပဒေမှာကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အဆိုပြုချက်နဲ့ အတည်ပြု သတ်မှတ်ထားခဲ့ ပြီးသား ခင်ဗျာ့။
နိုင်ငံခြားတိုင်း တစ်ပါးရဲ့ထောက်ပံ့၊ သြဇာကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ခံယူထားသူ၊ မိဘ၊ သားသမီး၊ မည်သည့်၊ ပုဂ္ဂိုလ်မှ ရွေးကောက်ပွဲ
ဒေါ်စုကတော့ ခေါ်င်းဆောင် မဖြစ်ရမယ့်၊ မဖြစ်ထိုက်တဲ့ သူတွေထဲမှာ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာပဲခင်ဗျာ့။
၁။ ဒေါ်စုဟာ အမျိုးသားရေးကို သစ္စာဖောက် ထားသူ ဖြစ်တယ်။
၂။ လူမျိုးခြား၊ဘာသာခြား၊တိုင်းတစ်ပါးသားကို လင်ထောင် ထားသူဖြစ်တယ်။
၃။မြန်မာ အ၀တ်အစား ၀တ်ပြီး မြန်မာ စကားပြော နေသော်လည်း မြန်မာ့အကြောင်းကို မသိ၊ မြန်မာစိတ် မရှိတော့သူဖြစ်တယ်။
၄။ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား တစ်ယောက်ရဲ့ မုဆိုးမ ဖြစ်နေစဉ်မှာပဲ နောက်ထပ် လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား (ဒီ တစ်ခါ အမေရိကန်) သူစိမ်း ယောက်ျားကို တိတ်တ ဆိတ် လက်ခံထားခဲ့တယ်၊ သူ့ ဘ၀ထဲကို ဆွဲသွင်းခဲ့ ပြန်တယ်။
၅။ အသက်ကြီးခါမှ အင်းလျားကန်မှာ ငယ်မူပြန်ခဲ့တယ်။
၆။ တိုင်းပြည်ကို ပြိုကွဲအောင် နည်းမျိုးစုံ နဲ့နှောက် ယှက်နေဆဲ ဖြစ်တယ်
၇။ အာရှနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေကို နမူနာထားဘို့ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်။
ဂ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို အလေးမထား၊ ကုလားကို လင်တော် ခဲ့တယ်
၉။ မြန်မာတို့ ရဲ့ တည်ဆဲ ဥပဒေတွေကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်လို မှ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခွင့် မရှိဘူးခင်ဗျာ့။
တကယ်တော့ ဒီမိုများရဲ့ အနောက်မယ်တော်ကြီးဟာ
အာရှနိုင်ငံများက အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ နဲ့ မတူတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ခုလို ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ခံစား ပေးဆပ်နေရတာပါ။
မတူညီတဲ့ အချက်တွေ များစွာထဲက တစ်ချို့ ကတော့....
၁။ အင်ဒို နီး ရှား သမတ မဂ္ဂါဝတီဟာ အမိုးသမီးများကို နှိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်၊ မွတ်ဆလင်ကိုပဲ လက်ထပ် ယူခဲ့တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့အမျိုးသားရေးပြဿနာ ကင်းတယ်။
၂။ သီိရိလင်္ကာသမတ ကုမာရာတွန်ဂါ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ သီဟိုနိုင်ငံသားကိုပဲ လက်ထပ် ယူခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။
၃။ပါကစ်စတန်က ဘနာဇီယာဘူတို အောက်စ်ဖို့ ဒ် တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ပါကစ်တန်နိုင်င့သား ပညာရှင်ကိုပဲ လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ သူမလည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အငြိမ်းစားယူပြီး နောက် လုပ်ကြံခံခဲ့ရတယ်။
၄။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရှိတ်ခ် ဟာဆီနာ သူနဲ့ ဘာသာ ၊ ယဉ်ကျေးမှုတူရာ မွတ်ဆလင်ကိုပဲ လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်၊
သူမလည်း ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
၅။ ဖိလစ်ပိုင်က ဂလိုရီယာ သမတဖြစ်နေတယ်။ ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသားကိုပဲ လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။
သူတို့ ကလေးတွေ အားလုံးဟာ တစ်ယောက်မှ အောက်ကလိအာတွေ မဟုတ်ကြဘူး၊ ကျီးကန်းလည်း မဟုတ်၊ဥသြလည်း မဟုတ်ဆိုတဲ့ အမျိုးထဲမှာလည်း မပါဘူး။ သူတို့မျိုးရိုးစဉ်လာကို ဒီ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်တွေက ထိန်းသိန်းစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့တယ်
ဒီမိုသမားများ မယ်တော်ကြီးလို့ ခေါ်ပြီး ပူဇော် ပ သနေကြတဲ့ ဒေါ်စုကတော့......
၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ စောင့်လေ မျိုးနွယ်ကို သစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်။ ဒါကို ဗုဒ္ဓက ကုလ၀ံသော စိရံ ဌတွာ လို့ဟောကြားထားခဲ့တယ်။
၂။ မြန်အမျိုးသားတွေကို သူနဲ့ မတူ မတန်ထင်ပြီး ဘေးချိတ်ထားခဲ့တယ်။
၃။ မြန်မာစိတ်မရှိ၊ မြန်မာ အကြောင်းကို နားမလည် တော့သူဖြစ်တယ်။
၄။ လူဆိုတာ အတူတူပါပဲ လို့ ပြောပြီး မြနမာအမျိုးသမီး တွေကို သူ့ ခြေရာနောက်လိုက်အောင် မှားမှားယွင်ယွင်း အသက်သွင်းဘို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
၅။ သကြား နဲ့ ဆား အရောင်တူနေတာကိုသာ တစ်ခု တည်းပဲ ကြည့်ပြီး အရည်အသွေး မတူတာကို ခွဲခြား နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို လူမျိုးခြား ဘာသာခြားလက်ထဲ မှာ စတေးပစ်လိုက် တယ်။
၆။ အဆိုးဆုံးကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကိုပါ စတေး ပြစ်ဘို့အမှားတွေ ထပ်ကျူးလွန်နေတာပဲ။
၇။ အမှား တစ်ရာ ကြောင့် ကျားစာဖြစ်သွားတဲ့ မုဆိုးက သူ့ ဘ၀တစ်ခုတည်းကိုသာ ရှံးဆုံးစေသော်လည်း၊ အမှား တစ်ခါကြောင့် ကုလားစာဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ကောင်းမြတ် တဲ့ အစဉ်အလာတွေကို ရိုက်ချိုးပြစ်လိုတာနဲ့ တူနေ တယ်။ ဒီ အမျိုးသား ခံစားမှု ( National sentiment) ကို ဒေါ်စု စော်ကားခဲ့တယ်။
ဒါတွေက ဒေါ်စုကို ဒီ အခြေအနေ ရောက်အောင် ပို့ ပေးလိုက်တာပဲ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပါ။ တပ်မတော်မှာ တာဝန်မရှိဘူးခင်ဗျာ့။
တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေးပါတီ မဟုတ်၊ ဒါကြောင့် တပ်မတော်ကို နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုလို မြင်ပြီး ပြောဆို၊ တိုက်ခိုက်၊ တောင်းရမ်း နေတာဟာ ပတ္တမြားဂူကို
ပတ္တမြားဂူကတော့ ကြာလေ ပြောင်လက်လာလေဖြစ်ပြီး
၀က်ကတော့ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဘ၀ကို နိဂုံးချုပ် ရရှာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာဝင် ကျနော့်မှာ ကရုဏာ ဖြစ်မိတာ တော့ အမှန်ပါခင်ဗျာ။
နားပါးမ၀င်၊ သိမြင်ခဲစွာ၊ သူယုတ်မာအား၊ ခြင်းရာကြောင်းကျိုး၊ ကောင်းဆိုးတရား၊ မဟောကြားရာ..ဆိုတဲ့ အဆုံးအမကို လိုက်နာသော အားဖြင့် အကြောင်း အကျိုးတွေကို ရှင်းပြတဲ့ နေရာမှာ သူတော်စင်တွေ နားမချမ်းသာဖြစ်စေတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေနဲ့ ကျနော် မတုန့် ပြန်ပါခင်ဗျာ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်း နဲ့မြန်မာဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးဝိသေသတွေကို သစ္စာ မဖောက်နိုင်လို့ ပါခင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်စစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ ကျနော် မောင်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု နဲ့ ၊ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး ကိုးကွယ်မှုတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အမျိုးသားရေး သက်သက်ကိုသာ လက်ကိုင်ထားလျက် ရေးသား၊ ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
ပါလီမန် ဒီမိုတုန်းကဖြစ်စေ၊ ယနေ့မြန်မာ ဒီမို အုပ်စုများကြားမှာဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု နဲ့ ၊ ပုဂ္ဂိုလ် ရေး ကိုးကွယ်မှုတွေကိုသာ တွေ့မြင်ကျြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်ကတော့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာ မဖောက်ဘ၊ဲ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အကျိုးစီးပွါးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု နဲ့ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့ အစွန်းတရား နှစ်ပါးကို ရှောင်ရှားနိုင်လို့ ပါပဲ။
တရားဦး ဓမ္မစင်္ကြာမှာလည်း ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ လမ်းစဉ် နဲ့ အတ္တကိလမထာနုယောဂ လမ်းစဉ် နှစ်မျိုး လုံးဟာ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းမှု အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ရှောင်ကြဉ်ဘို့ လိုကြောင်း ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တော်တိုင်ပဲ....
ဒွေ မေ ဘိက္ခဝေ အန္တာ ပဗ္ဗဇိတေန န သေ၀ိတဗ္ဗာ..လို့ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယနေ့ မျိုးချစ် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံရေး အစွန်းရောက်မှု၊ လူမိ်ျုးရေး အစွန်းရောက်မှု၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှု စတဲ့ အစွန်းရောက် တရားတွေကို ရှောင်ရှားပြီး ဗုဒ္ဓ ဘုရား ဟောကြားဆုံးမ ခဲ့တဲ့ မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ လို့ ခေါ်တဲ့ မျှတတဲ့ လမ်း၊ အလယ် အလတ် လမ်းစဉ်ကို တည့်တည့်မတ်မတ်၊ ဖြောင့်ဖြောင့် တန်းတန်း လျှောက်လှမ်းနေပါတယ်။
အများသဘောတူ ဆန္ဒ နဲ့အသိအမှတ်ပြု ချမှတ် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ လမ်းစဉ် (၇) ချက် နဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ လမ်းစဉ် ပါပဲ ခင်ဗျာ။
ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့လူ့ ဓလေ့ မမေ့ ကြပါနှင့် ဟူ၍သာ...
19 December 2009 at 22:53
Military dogs wrote above comment. They just bite the bone that threw by killer Than Shwe. Burma can't move forward with these military dogs with their mind set.
may i know , WHERE IS THIS DOG MAUNG LIVING ? I guess , this dog IS ZAWMYO.
I like your article.It's true.
It doesn't matter whether you live in Myanmar or not. Your attitude is important.
You know there are some people who are thick and lack of consideration like simple man...
Why did she live in abroad? Nay win didn't want them in our country and he assigned her mumasaambassador. She followed her mum and lived in abroad for her studies later.It's not her fault.Simple man, Shut up your mouth.there is always room for her in our country. 1990 election is the best evidence..Thank you
Now i realised that Maung critisized DASSK for not getting married with Myanmar guy like him.:P
Yeap, why didn't she findaguy like Tay Za who was raped by than shwe's daughter who wants to be second wife.That Maung is obviously spy a/c to his nonsense comment.It's funny to hear that DASSK planned to meet with american guy.
If you used to live in her compound , you must know that how it is guarded and how she is prohibited.you should know it's possible or not. Eat rice. don't eat shit..ok
It's not her who is trying to destroy peace and tranquality of our country.It's regimes who uses power and authority as their weapons.They tried to assasinate her near DEPEYIN. BE ashame of yourself..Thank you.
The regimes always says that we are cooperating with international community to stop drug traffic. Yes, it's true. They destroy drugs in front of ambassadors. However, that is only 1/10 of real drugs.Where are the rest? It'sagreat news to say that how many drug users they have caught. But there is an answerless question :why can't they arrest the main drug seller? why? cos their children are the main drug sellers, no law for them..maybe they live in lawfree zone..
ဦးနေ၀င်းနှင်ထုတ်လိုနိုင်ငံခြားမှာနေရလည်းမိူးချစ်စိတ် ရှိရင်ကိုယ့်နိုင်ငံသားယောင်္ကျားကိုယူလိုရပါတယ်။ ခုမှကယ်တငိရှငိလိုဘာလိုလိုလာလုပ်နေတာပဲ။ဘုရားစူး Nobel prize နှစ်၂၀သာကြာလာတယ်၊ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လုပ်နိုင်လိုလဲ။ဦးနှောက်မရှိ သူများခိုင်းတာလိုက်လုပ်နေတာပဲ၊
No place for her in our country.
25 December 2009 at 00:58
Hell isaspace for military dogs who kill the people and destroy Burma into poorest country in the world. There is no other suchaspace for them.
i think we should follow good things for our country. no need to think personal cause. it's useless. we need only individual good.!
(If you are reallyaBuddhist, let me tell you one thing, in Buddhism, Nothing is Permanent,...)
ဗုဒ္ဓ ရဲမူရင်း စကားတော်မှာတော့..
သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ=သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ အရာအားလုံးဟာ ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးလို့ဟောကြားထားတော်မူပါတယ် ခင်ဗျာ။
အဲဒီလို မမြဲသူတွေ အားလုံးထဲမှာ ဒေါ်စုရဲ့ မမြဲခြင်းက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး၊ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်အောင်ကို
၁။ မိဘရဲ့ မျိုးရိုးဂုဏ်တွေကို ပျောက်ကွယ်အောင် လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားကို ဖင်ပုတ် လင်လုပ်ခြင်း
၂။ တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်သွားခြင်း
၃။ တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှကို မယ်မယ် ရ ရ မလုပ်သေးခြင်း( အသက်က ၆၀ ကျော်)
၄။ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး အကယ်ဒမီ မို့ မို့မြင့်အောင်ကမှ
ေ၇ှ့တန်းရေက် တပ်မတော်သားတွေကို သူမရဲ့ အနုပညာနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
( နိုဘယ် ဆုရှင်ကြီးကျ တော့ အိုပယ် မရှုချင် ဖြစ်နေခြင်း)
၅။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် တိုင်းတစ်ပါးသား၊ လုမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားတွေရဲ့ ရင်ခွင်၊ ကာမဂုဏ် ယစ်ပလ္လင်မှာ အားရပါးရ သဝေထိုးပြီးနောက်မှ မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါတယ်လို့မျက်ရေခံ ထိုးပြီး ငိုပြနေခြင်း၊
၆။ ပြည်ပ အစိုးရတွေကို အားကိုးပြီး တပ်မတော်ကို ရန်သူလို သဘောထား၊ ပိတ်ဆို့ မှုဆိုတာတွေ နဲ့ဆက် လက်နှောက်ယှက်နေခြင်း
ဒါတွေဟာ ရိုးရိုးသားသား မမြဲတာထက် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဒုက္ခပေးသော မမြဲခြင်းတွေ မဟုတ်လား ဗေဒါ။
စုဘ၀ ဆုရတာကို ညုပြနေသူများ မရှုမလှ ဇာတ်သိမ်းခန်းကို ရောက်နေပြီဆိုတာကော သိရဲ့လားဗျာ။
ဆုမရလဲ လူ့ ဘ၀မှာ သုခဖြာနေတဲ့ ရွှေမြန်မာ မျိုးချစ်များကတော့ ဘယ်သောအခါမှ နိုင်ငံရေး ရောင်းကုန် ဘ၀ကို အရောက်မခံကြပါကြောင်း။
အဲဒီလို မမြဲသူတွေ အားလုံးထဲမှာ ဒေါ်စုရဲ့ မမြဲခြင်းက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး၊ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်အောင်ကိုပဲ
၂။ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်သွားခြင်း
၃။ တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှကို မယ်မယ် ရ ရ မလုပ်သေးခြင်း( အသက်က ၆၀ ကျော်နေပြီ နော)
ရှေ့ တန်းရောက် တပ်မတော်သားတွေကို သူမရဲ့ အနုပညာနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
( နိုဘယ် ဆုရှင်ကြီးကျတော့ အိုပယ် မရှုချင် ဖြစ်နေခြင်း)
ဒါတွေဟာ ရိုးရိုးသားသား မမြဲတာထက် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဒုက္ခပေးသော မမြဲခြင်းတွေ မဟုတ်လားဗျ။
(ဗုဒ္ဓ ရဲမူရင်း စကားတော်မှာတော့..
သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ=သင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ အရာအားလုံးဟာ ဘယ်အရာမှ မမြဲဘူးလို့ဟောကြားထားတော်မူပါတယ် ခင်ဗျာ။)
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီလို မမြဲသူတွေ အားလုံးထဲမှာ ”တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် မိသားစုတွေရဲ့” မမြဲခြင်းက အထင်ရှားဆုံးပါဘဲ...
(၁)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသေသွား သောအခါ.. ၄င်း၏မိသားစု.. ပြည်ပပို.ခံခဲ့ရပြီး ပြည်တွင်းမှာ လူရာသွင်းမခံရ ပြည်တွင်းသို.ပြန်လာခွင့်ပင် ကန့်သတ်ခံခဲ့ရ ပါသည်။
(၂)ဗိုလ်စေါမောင် သေသွားသောအခါ.. ၄င်း၏သားသမီးများ ပြည်ပရောက်သွားရပြီး ပြည်တွင်းမှာ လူရာသွင်းမခံရတော့ပါ ။
(၃) ဗိုလ်နေ၀င်း သေသွားသောအခါ သူ.သားသမီး နဲ့ မိသားစု ပြည်တွင်းမှာ လူရာသွင်းမခံရတော့ပဲ အချို.ပြည်ပမှာနေရ.. အချို.ထောင်ထဲပင်ရောက်ခဲ့ ရပါသည်။
(၄) ဗိုလ်သန်းရွှေ သေသွားသောအခါ..... (သူတို.ဇာတ်သိမ်း မဝေးတော့ပါ ..မျှော်ပါ)
၄င်းတို. အားလုံးထဲက... ”မြန်မာလူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည် ဂုဏ်ဆောင်” ယခုချိန်အထိ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့ပြီး ကမ္ဘာ့စံပြ လူသားအဖြစ် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံးက မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်အောင် အနစ်နာခံရဲ ကိုယ်ကျိုးစွန်.လွှတ်ရဲသူ ကောင်းသတင်းဖြင့်သာ ကျော်ကြားသူ သတ္ကိရှင် အမျိုးသမီးကတော့ .....
တစ်ဦးသော ”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ပါဘဲ...။ သူ.ကို မြန်မာ ပြည်သူအများက အစါးထိုးမရသော လူထုခေါင်းဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ် ချီးမြှောက်ကြသည့်အပြင် ... ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှ ပညာတတ်များပင် မသိသူမရှိ ဂုဏ်ပြု လေးစါး ချစ်ကြည်ညိုစွာ ပေးထါးတဲ့ ဘွဲ.ထူး ဂုဏ်ထူး Title များ ၁၀၀ ခန်.ကို ....ဒီနေရာမှ စါရင်းထုတ်ပြရန် စါမျက်နှာ မလုံလောက်သည့်အတွက် သည်းခံ ခွင့်လွှတ်ကြပါရန်.. မေတ္ဘာ ရပ်ခံအပ်ပါသည် ခင်ဗျား...။
(မြန်မာ့ရာဇ၀င်မှာ သူမ လောက် ကမ္ဘာကျော်ဆုပေါင်း ဘွဲ.ပေါင်း ရာချီ ပိုင်ဆိုင်သော သူ ”တဦးတယောက်မျှ” မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူး သေးပါ။ သူမအား မတရားနှစ်ရှည် ထောင်ချ ထါးပြီး ညှင်းပမ်းလျက်ရှိသော နအဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်.. သူတို.သာ ဒေါ်စုအား မတရား ထောင်မချ လူမဆန်စွာဖိနှိပ်မှု မပြုခဲ့လျင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကမ္ဘာက ဒီမျှလောက် သိကြ ဂုဏ်ပြုကြ မည်မဟုတ်ပါ။)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပါတ်သက်၍ ဖတ်စရာ မှတ်စရာ စါမြည်း အနည်းအကျဉ်းမျှသာ.......
Heriones of Peace; http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/articles/heroines/index.html
Ambassador of Conscience;
Plus HUNDREDS and HUNDREDS MORE....
Toe Toe said...
ဒေါ်စုတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်သင့်လား မသင့်လား မြန်မာပြည်သူလူထုက ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ နအဖ နဲ့ သူ.နောက်လိုက်တွေအလုပ် မဟုတ်ပါ။
အတူလက်တွဲလုပ်ကြဘို့ သမိုင်းဝင်မဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ စာကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ မတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အတွက် လူတွေစိတ်ပြောင်းအောင် ဒေါ်စုကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တဲ့ စာ များများ ရေးကြဘို့ နအဖရဲ့ ပြန်ကြားရေးဌါန လခစား စာရေးသူဂျပိုး များကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
သကြား နဲ့ ဆား
ခွဲခွဲ ခြားခြား နားလည်ခဲ့ရင်...
အလုံးစုံ ပိတ်ဆို့ ရေး
အလုံးစုံ ဆန့် ကျင်ရေး
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး ဆို တဲ့
မြန်မာအစား အစာတွေကို စား
အမှန်အတိုင်း သိခဲ့ ရင်...
တိုင်းတစ်ပါးသားတို့ ရဲ့ ရင်ခွင်
မျိုးချစ်တပ်မတော် နဲ့ 
ဆိုတာကို သဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ရင်...
ခုတော့ ရွှေမြန်မာပေါင်းတို့ ရေ...
ဒေါ်စု Aris ရယ်ဗျား ....
Su Aris (aka) Daw Suu
ိုwere able to keep
Daw Suu (aka) Su Aris
ိုhadaheart
to love Myanmar in deed,
were able to listen to
her won brother asafather figure,
had been smart enough
a difference between sugar and salt
though they may be same in color,
had not been conceited
and forgotten herself in the shadow of the west,
had not married toaforeigner
with alien faith,
had not betrayed
her anscesters and national tradition,
had been able to maintained
her own race by heeding
of preserving own racial heritage,
had not been an axe handle
had renounced all destructive acts
and had not resorted to the means of
defiance of the existing laws and
confrontations against the Tatmadaw,
had not been lost in
various prizes falsely thinking that
herself is the reason for all of them,
had been able to demostrate
her love of Myanmar and
truly comprehends Burmese spirit
as much as she speaks Burmese,
as much as she eats Burmese foods,
as much as she as breaths in Burmese spehere and as much as she wears Burmese dress,
had not lost her life,
her race, her blood, and
noble traditions and culture of Myanmar
in the laps and sacrificial sexual beds of aliens who have opposite religions and racial line,
had not tried to grab
through destructive acts ofashortcut,
had cooperated with the Tatmadaw
and followed along the National Conventions
and the signs of the Roadmap for 2010,
the Strength of Myamnar lies within,
had had faith that
the blood is thicker than the skin,
Oh, citizens of golden Myanmar!
Get ready to get crowned
with disciplined democracy
in 2010 as we all know soon.
Therefore, we must leave behind
an alien turned Daw Suu (aka) Su Aris
who has been so free to go back to England
သင်လို လူများ မလို ပြီ။
ကမောက် ကမ ဖြစ်လေပြီ။
သင့်ရဲ့ ကံ
မဟန် ဒိဋ္ဌိ ၀င်နေသည်။
ထို့ ကြောင့် ဖြစ်ဟန်
ဒုက္ခ တွေ့ လိမ့်မည်။
(နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲသမ္မတတစ်ယောက်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူ့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီဖိုလိုတယ်..)
မင်းပထွေးအကြီး စေါမောင်က ကြီးကြပ်ပြီး၁၉၉၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားတဲ့ ရလာဒ်ဟာ စေါမောင်သေတာနဲ့ ပျောက်သွားရောလား?
ဘယ်မှာလဲ မင်းတို.ပြောတဲ့ စံချိန်စံညွှန်း?
ဒါဆို၂၀၁၀ ၀င်ပြိုင်နေလို.လဲ အပိုဘဲ မင်းပထွေးအငယ် သန်းရွှေ သေရင်လဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက ”မျောက်မျက်လှည့်ပွဲကြီး” ဖြစ်သွား အုံးမှာပဲ။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ခေါ် အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင် ဖါခေါင်းတွေ အုပ်စီးတဲ့ ကြေးစါးတပ်က ဒီလိုဘဲလေ... ဖါသယ်မ ပါးစပ်လို ဒီနေ့ တမျိုး မနက်ဖန် တမျိုး။ ဘာမှ ယုံကြည်လို.မရဘူး။
If you wereatrue Myanmar,
Myanmar history and learned good lessons
just as the Tatmadaw has done.
If you were not misled by aliens,
you would have regreted for
your mudslingings against Myanmar
while the Tatmadaw has been defending her.
If you were not trapped by the dollar,
you would have never sold yourself
betraying Myanmar with no shame
while the Tatmadaw never betrays national cause.
If you were true to your veins and bones
asapatriotic Myanmar citizen,
you would have never exploded bombs
against the people and the country
while the Tatmadaw is in hot pursuits of you.
If you were not trained by the western hands,
you would have never barked Myanmar
while the Tatmadaw stands ready for the country
to defend tooth and nails.
If you wereaman and patriotic enough,
you would have been welcome to the Tatmadaw
to give youachance for proving yourself
how you share noble tasks of defending Myanmar
If you were knowledgeable about Myanmar,
you would have never lost your pride that
you had beenapart of proud traditions and culture of Myanmar through pre Bagan era
and to the current Tatmadaw leadership.
If you were grateful enough to Myanmar,
you would have been doing something good
instead of commiting destructive acts
that cause mayhem and terrors to Myanmars.
If you were notablind follower of Daw Suu,
you would have been ashamed of yourself
for belittling the Tatmadaw
for confronting the Tatmadaw
for threatening utter desvastation against the Tatmadaw
for keepingadefiant stand against the Tatmadaw.
If you were wise enough to see through,
you would have never beenapessimist
while you walk on the roads that
the Tatmadaw has made for the country.
If you were not blinded by the wetern propanganda,
you would have been able to see
what the Tatmadaw has done
for the country and for the people.
If you dared complain about
what your western master has been messing
around the world with lame excuses,
you would have already understood
the Tatmadaw that is the only reliable force
for everlasting unity and sovereignty of Myanmar.
(မင်းတို့ ပဲ အသိဥာဏ်ရှိရှိအများအကျိုးအတွက် သံဃာသတ်..)
မြန်မာနိင်ငံရဲ့ သမိုင်းဦး အချိန်က စပြီး ယနေ့ မျိုးချစ် တပ်မတော် လက်ထက် အချိန်အထိ၊ မြန်မာ အစိုါ်ရ အစဉ်အဆက် ဘယ်သံဃာကို မှ လက်ဖျား နဲ့ တောင် မထိခဲ့ဘူးဗျ၊ သတ်ဘို့ ဆိုတာ ဝေလာဝေး။
သံဃာဆိုတာ လမ်းမပေါ်မှာ ဆူညံ ဆူညံဖြစ်အောင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ လက်သီး လက်မောင်း တွေတမ်း ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေသူကို ပြောတာ မဟုတ် ဘူးဗျ။
သံဃာ ၂ မျိုး နှစ်စားပဲ ရှိတယ်။
(က) သမုတိ သံဃာ
(ခ) ပရမတ္ထ သံဃာ
(က) သမုတိ သံဃာ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန် နှစ်မျိုးကို ရိုးရိုးလေး အေးအေးချမ်းချမ်း ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ပုထုဇဉ် ရဟန်းတော်၊ ဆရာတော်တွေ ကို ခေါ်ပါတယ်။
သူတို့အလုပ် နှစ်မျိုးကတော့....
၁။ ပရိယတ္တိ ဓုရ=ပိဋက သုံးပုံ ဘုရားဟော ကျမ်းဂန် စာပေတွေကို ကိုယ်တိုင် သင်ယူ လေ့လာ၊ ပို့့ ချ ပေး ခြင်းဆိုတဲ့ ပရိယတ္တိ သာသန တာဝန်
၂။ ပဋိပတ္တိ ဓုရ=ကိုယ်တိုင် သင်ယူ လော့လာထားပြီးတဲ့ တရားတော်အတိုင်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကိလေ သာ တရားဆိုးတွေကို ပယ်နိုင်အောင် ကျင့်သုံးခြင်း ဆိုတဲ့ ပဋိပတ္တိ သာသန တာဝန်။
သံဃာဆိုရင် ဒီအလုပ် နှစ်မျိုးကိုပဲ လုပ်ရမယ်လို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင် ဥပဒေ ချမှတ်ထားခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ့
(ခ) ပရမတ္ထ သံဃာ ဆိုတာကတော့ လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟ ကိလေသာတွေကို ပယ်သတ်ပြီး၊ ပယ်သတ်ဆဲဖြစ်နေတဲ့ အမြင့်ဆုံး ရဟန္တာ၊ အနိမ့်ဆုံး သောတာပန် အရိယာ သံဃာကို ခေါ်တာပါ ခင်ဗျာ။
အဲဒီတော့ လမ်းမပေါ်မှာ ထွက် ဆူပူ ပြီး၊ မေတ္တာ အရေခြုံထားတဲ့ ဒေါသ ထွက်နေသူတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံး ရဟန္တာကို မဆိုထားနဲ့ အနိမ့်ဆုံး သောတာပန် အရိယာ တောင် မပါဝင်နိုင်ဘူးဗျ။ အရိယာ သံဃာနဲ့ သူတော်စင် မှန်ရင် လမ်းမပေါ်မှာ ထွက် မဆူဘူးဗျ။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးတော်မူကြတဲ့ သူတော်စင်နဲ့၊ သံဃာစစ် သံဃာမှန်ဆိုတာ သူ့ နေရာမှန်၊ အလုပ်မှန်ကို သူတို့ သိတော်မူကြ ပါတယ်ခင်ဗျာ့။
ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ မျိုးချစ်တပ်မတော် အစိုးရက အဖြူအမဲ ခွဲခြား နားလည်ပြီး ပဂ္ဂဟ၊ နိဂ္ဂဟ ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံး နေတာပေါ့ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဆိုတာ
ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ဘာသာဖျက်၊ သာသနာဖျက် လုပ်ရပ်ပဲဗျ။
အဲဒီ အဖျက်လုပ်ရပ်တွေကိုသိလို့အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုး လေးစား တန်ဘိုးထာတဲ့ မျိုးချစ်တပ်မတော်က အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်နေရ တာပေါဗျာ။
ဒီလို သူတော်စင် သံဃာ အစစ်အမှန်တွေကို ကာကွယ်ရတဲ့အတွက်လည်း တပ်မတော်မှာ နေ့ ည မခြား မဟာ ကုသိုလ်စိတ်တွေ တိုးပွါးနေရတာပေါ့ဗျာ။
All stupid military dogs, killer than shwe does not have any bone left for you and finally military dogs must eat military dogs in his plan even though you are yelling for him now. Killer than shwe used money for his own interest and shamelessly requesting money from international for Nagis Victims.
မြန်မာနိင်ငံရဲ့ သမိုင်းဦး အချိန်က စပြီး ယနေ့ မျိုးချစ် တပ်မတော် လက်ထက် အချိန်အထိ၊ မြန်မာ အစိုးရ အစဉ်အဆက် ဘယ်သံဃာကို မှ လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိခဲ့ဘူးဗျ၊ သတ်ဘို့ ဆိုတာ ဝေလာဝေး။
From the dawn of Myanmar history to the times of current patriotic Myanmar Tatmadaw, notasingle government has committed an insult to any member of the Holy Samgha Order, let alone takingalife of any member of it.
The Holy Samgha Order excludes those unruly mob-like ones who raise their arms and hands and shout in their greed, hate, and delusion unfitting to the monks.
There are only two types of the Holy Samgha.
(က) သမုတိ သံဃာ=the Conventional Samgha
(ခ) ပရမတ္ထ သံဃာ=the Noble Samgha
(က) သမုတိ သံဃာ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန် နှစ်မျိုးကို ရိုးရိုးလေး အေးအေးချမ်းချမ်း ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်၊ ဆရာတော်တွေကို ခေါ်ပါတယ်
(a)The conventional Samgha means those who are (Puthujjana Monks) and have been humbly and peacefully carrying out the duty of learning and teaching of the Buddha’s words.
Their only two duties are…
1. Pariyatti dhura-the duty of learning and teachings of the Buddha’s words
2. Patipatti dhura- the duty of putting the Buddha’s words into practice in order to get rid of defilements of greed, hate, and delusion.
Hence, the true Samgha is assigned only to these two duties by the Buddha Himself.
(b) Paramattha Samgha means those who are still practicing for Enlightenment and have already practiced for it at least from the Stream-enterer to the Arahants at the most.
Therefore, it can be deduced that there could not include evenaStream-Enterer let alone an Arahant among those who made noises with full of hate and anger but Loving-kindness in name only. In fact, noble persons do not come out on the streets to make noises anyway.
All peace-loving noble persons and Samgha, in deed, know their worthy positions and places.
Therefore, the patriotic Tatmadaw is able to distinguish the noble and the ignoble and practiceapolicy of carrot and stick or rewards and punishments.
In fact, what so called activists call “Golden Color revolution” is an act of destruction in the disguise of religion damaging the image of Buddhism.
Knowing these destructive elements, the patriotic Tatmadaw protects and cherishes race, religion, and Sasana even sacrificing their lives if need be.
Asaresult of protecting the Holy Samgha as such, the patriotic Tatmadaw keep gaining great merits day and night.
မျိုးချစ်စိတ် ရှိလှပါတယ် ဆိုတဲ့ တပ်မတော်သားကြီးတွေ..ရဲ့ ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတဲ့ ကမ္ဘာသိ လုပ်ရပ် များ...
(၁)နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီး ၀င်လာမှာ သိရက်နဲ. ပြည်သူတွေ သန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အသက် အိုးအိမ်ကို ကြိုတင် မကာကွယ် အသိမပေး.. ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ တေဇပိုင် Air Bagan လေယဉ်တွေ အားလုံးကို တော့ ရန်ကုန်က မန်းတလေးကြိုပြီးရွှေ.ထါးခဲ့ကြတယ်။
(၂) ပြည်ပအလှူရှင်တွေရဲ့ အလှူ ထောက်ပံ့ကြေးငွေ တွေကျတော့လဲ ($1 = ၆ကျပ်) နှုံးနဲ့ နအဖ က ဒေါ်လာလဲယူလိုက်ပြီး အလှူငွေ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီ ခေါင်းပုံဖြတ် အိပ်ထဲထည့် ဘုံးခဲ့သေး။ (ကမ္ဘာသိ မြန်မာသိ- ကမ္ဘာ့သတင်းတွေထဲ ဟိုးလေးတကျော်)။
(၃) World Food Programme က စါးစရာမရှိ ဒုကရောက်နေတဲ့ နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဆန် အခမဲ့ဝေဖို. စစ်အစိုးရဆီက ပြည်တွင်းဆန်ဝယ်တာ.. မမြတ်မထုတ်ရရင် မနေတတ်တဲ့ နအဖ က ၁၀% အခွန်ငွေ မိုက်ကြေးခွဲ တောင်းလိုက်သေး ..ကိုယ့်ပြည်သူကို ပြည်ပက အခမဲ့ လာကြွေးတာ တောင် မောင်မင်းကြီးသား နအဖ ကဖြတ်စါး လဒ်စါး ။ ”ကမ္ဘာမှာ အကူအညီပေးလာတာ ဆယ်စုနှစ် များစွာ ရှိခဲ့ပြီ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ ဒီလို မကြုံဖူးခဲ့ ပါဘူးတဲ့” WFP ကပြောသွားလဲ- စေါက်ရှက်မရှိတဲ့ ငတ်ကြီးကျ နအဖ ကတော့ (ခပ်ပြောင်ပြောင်ဘဲ -ဖင်ကြီး)။
ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို သူတို.ဘဲ စေါင့်ရှောက် ကျွေးမွေးထါး သယောင်ယောင်.. အရှက်ကင်း ပုံများတော့ ကမ္ဘာကျော်ပါပေရဲ့ ။
ပြည်သူက တရားသဖြင့် မဲပေး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထါးသော တရားဝင် အစိုးရအဖွဲ.အစည်းကို ပြည်သူ.ဆန္ဋမပါပဲ လက်နက်ကိုင် ဆန်.့ကျင်တော်လှန် သူဟူသမျှကို တိုင်းပြည်၏ ”လက်နက်ကိုင် သူပုန် ” ဟု ခေါ်ပါသည်။
နအဖ= လက်နက်ကိုင်သူပုန် ဖြစ်သည်။
ငါလိုးမသားငမောင်..မင်းတွေးတွေဒီလောက်ကောင်းနေတာ..မင်းပထွေးတွေ ပါတဲ့ချီးကို မနက်တိုင်းမှီဝဲနေလို.ဖြစ်ရမယ်.
sawhtat htat said...